Umshini wam wokucoca i-G9, uhlalutyo, ukusebenza kunye nexabiso | Iindaba zeGajethi
Namhlanje sonwabile ukuthetha nawe malunga enye yezixhobo zeXiaomi ezivakala kakhulu mva nje. Ngesi sihlandlo, akukho zinkampani zithathe inxaxheba nguXiaomi, sijamelene nazo isincedisi esivela kusapho lakwaMi. Ngaphakathi kuluhlu olubanzi lwezinto zokuncedisa ekhaya, kwezi ntsuku sikwazi ukuvavanya Isixhobo sokucoca iMi Vacuum Cleaner G9.
Isitshixo sokucoca loo nto iphucula kakhulu iziphumo xa kuthelekiswa izixhobo zokucoca ezisebenza ngokuzimela ukuba ayizizo zonke ezigqibezela ukweyiseka. Ukuba ufuna ntoni isicoci somatshini osilawulayo, iMi Vacuum Cleaner G9 lolona khetho lubalaseleyo. Amandla okufunxa nakweyiphi na indawo ngazo zonke izinto eziyimfuneko.
1 Umshini wam wokucoca i-G9 amandla kunye nolawulo
2 Unboxing Mi Umshini wokucoca i-G9
3 Uyilo kunye ne-ergonomics yeMi Vacuum Cleaner G9
4 Iimpawu zokucoca iMi Vacuum Cleaner G9
5 Ukucacisa itheyibhile yokuCoca uMshini G9
Umshini wam wokucoca i-G9 amandla kunye nolawulo
Ukucocwa kwendlu ngamanye amaxesha kuye kube yinto ebonwa ngabantu abaninzi. Kodwa kuthi abo bangaxakekanga kukucoca, zinezixhobo ezifanelekileyo zokugcina ucoceko ekhaya yinto ebalulekileyo. Isicoci seMi Vacuum isicoci esiyiG9 isixhobo esifanelekileyo ukuze ikhaya lethu lihlale likhona ngendlela esithanda ngayo, licocekile. Ngaba yile nto uyifunayo? Thenga iMu Vacuum Cleaner G9 ngoku ngexabiso eliphambili.
Isicoci sokucoca ulwelo kunye bamba ngaphandle komthungo ngesandla esinye. Kwaye sinamandla okusindisa ukuze sikwazi ukuyisebenzisa naphina endlwini okanye emotweni yethu. Sibonile izinto zokucoca indawo yokucoca ezibonelela ngenani elikhulu lezinto zokucoca. Kwaye ihlala isenzeka ukuba uninzi lwazo luhlala lungasetyenziswanga kwaye lide lilahleke. UXiaomi wenza kakuhle kubandakanya izixhobo ezimbalwa kodwa ziluncedo nge-100% kuyo nayiphi na imeko.
Unboxing Mi Umshini wokucoca i-G9
Besiphawula ngokungabalulekanga kwezixhobo ezithile esikhe sazifumana kwezinye izinto zokucoca. Ngoku lixesha lokuba ndikuxelele into esiyifumana ngaphakathi kwebhokisi Isicoci iMu Vacuum Cleaner G9. Into yokuqala kukuba ibhokisi ibonakele ukuba inkulu kunokuba bekulindelwe, kodwa ichazwa zezinye izixhobo ezikhoyo.
Sifumana umzimba womshini wokucoca. Yibane ubungakanani obufanelekileyo Ukusebenza ngesandla esinye kodwa mhlawumbi kunzima. Ukuba siyayiqonda ngenxalenye evunyelweyo, sifumana i-trigger ephambi kweminwe apho siya kuthi sisebenze isicoci sokucoca ukusebenza.
Esinye sezona zixhobo zinamandla kakhulu yile isibiyeli esinokukrwela eludongeni okanye emnyango wekhabethe. Apho singashiya iMu Vacuum Cleaner G9 xa singayisebenzisi. Kwaye ukuba siyibeka kufutshane neplagi, sinokuyibiza kwakhona xa siyishiya kwinkxaso.
Sinefayile ye- ibrashi emxinwa, Ukusetyenziswa kumgama omfutshane, okanye kwimethi yemoto, umzekelo. Y ibrashi enkulu ngakumbi kumgangatho okanye iikhaphethi. Le bhulashi inkulu ilingana netyhubhu yolwandiso esiza kuyibeka ukucoca umgangatho ngaphandle kokugoba.
Sikwafumene i isixhobo sokufikelela ngokulula kwiindawo ezomeleleyo esinokuziqhelanisa ngokuthe ngqo okanye kunye netyhubhu yolwandiso. Kwaye enye into yokugqibela enefayile ibrashi encinci ekugqibeleni ukucoca ukungcola kancinane ngakumbi "kunzima" kakuhle. Ewe sinayo Intambo yokutshaja edibanisa isicoci sokucoca umbane kwinethiwekhi yombane.
Fumana isicoci seMi vacuum G9 ngoku, isicoci esifunwa ngumntu wonke.
Uyilo kunye ne-ergonomics yeMi Vacuum Cleaner G9
Xa sithetha ngeXiaomi, siphantse sithethe ngoyilo olulungileyo. Ifemi enayo umgca woyilo obonakalayo kuso nasiphi na isixhobo. Isitayile sakhe sisekwe kwimigca elula, imibala elula (ihlala imhlophe), kunye nelogo ephantse ingaqatshelwa. Isicoci iMu Vacuum Cleaner G9 ngumzekelo ocacileyo wayo yonke le nto.
Ukujonga umzimba womshini wokucoca, unayo fomati eyilelwe ukusebenza ngesandla esinye, ayinamsebenzi ilungile okanye isekhohlo. Ukuyibamba ngenxalenye evunyelweyo esinayo isiziba esihle sokuvula ukutsala.
Emazantsi sifumana ibhetri, Yintoni isuswe ngokulula ngonqakrazo olulula. Iinkcukacha eziza kuthakazelelwa, kuba xa kunokwenzeka ukuba ibhetri yehle okanye ilahlekelwe ngumthamo sinokuyitshintsha kwaye ugcine ukusebenzisa ezinye izixhobo ngokugqibeleleyo.
Kulo ngasemva leyo, ukuyibamba ngesandla, ihlala ifikeleleka ngobhontsi, siyifumana ulawulo lokutsala amandla. Sinethuba lokubeka utshintsho phezulu Amandla amathathu okutsala ahlukeneyo. Ukwazi ukuba Amandla aphezulu angama-120 kwaye ngamanye amaxesha inamandla kakhulu kwaye ayikonwabisi ukucoca ikhaphethi, umzekelo, kuba ibambeke ngokupheleleyo.
Kulo phezulu yomzimba wesicoci sokucoca sifumana MI ilogo. Kwiziko leemoto, kwaye ngenxalenye ebonakalayo singabona iifayile zeorenji kunye nezazo Itanki yelitha eyi-0,6. Umbala omhlophe wesicoci sokucoca isenokungabi yeyona nto ifanelekileyo njengoko iba mdaka ngokukhawuleza kwaye amabala ayabonakala kwangoko. Zonke ezinye izixhobo zinombala ofanayo, kunye neenkcukacha zeorenji njengakwiibhulashi. Ngaphandle kwe- ityhubhu enemibala yentsimbi.
Iimpawu zokucoca iMi Vacuum Cleaner G9
Igama likaXiaomi lihlala linxulunyaniswa iimveliso ezisemgangathweni ngamaxabiso amahle. Kwaye le yinto efunyenwe ngokunikela "ngokufanayo" njengokhuphiswano phantse lonke ixesha ngexabiso eliphantsi kakhulu. Ityala lezinto zokucoca akukho ngaphandle kwaye siyayibona indlela Umgangatho ophezulu kakhulu wokucoca i-vacuum unokuba ngowethu ngokuncinci yeyiphi enye indleko zezibonelelo ezifanayo. Sukuyinika ngaphezulu, odola iMu Vacuum Cleaner G9 ngoku
Enye yeenkcukacha zokuqala esizijongayo xa kuthengwa isicoci secoceko amandla okutsala. Njengoko besesitshilo, isicoci seMi Vacuum Cleaner G9 sineendlela ezintathu zokutsala ngokusekwe kumandla. Ukuba ngowona mandla aphezulu okutsala Iilitha ezingama-120 zomoya. Sele sikuxelele loo nto sinokucoca indlu iphela, nditsho neerug ngenqanaba elisezantsi, yanele ngokugqibeleleyo.
Isicoci iMu Vacuum Cleaner G9 sixhotyiswe ngento ebizwa ngokuba yiyo Itekhnoloji yecyclonic. Le nkqubo isekwe kwi Iinkanyamba ezili-12 inceda ukucoca umoya wasekhaya nge 99,97% inqanaba lokuhluza kwaye kwangaxeshanye, ithintela isihluzi kunye nokuvalwa kweemoto. Ngale ndlela, ukusebenza kwe- I-aspirator ejikelezayo kwi-100.000 rpm kwaye ubomi obuluncedo bokusebenza kwayo buyanda.
Ukuzimela Ngenye yamandla eMi Vacuum Cleaner G9. Sifumene ixesha le ukuya kuthi ga kwimizuzu engama-60 isebenza. Ukuba, kuya kuxhomekeka kumandla okutsala esiwakhethileyo ukuze ukuzimela kolule ngaphezulu okanye ngaphantsi. Sebenzisa inqanaba lamandla aphezulu ibhetri ayizukuhamba ngaphezulu kwemizuzu eli-10. Kodwa siyakhumbula ukuba kwinqanaba elincinci lamandla liya kuba ngaphezulu ngokwaneleyo kuzo zonke iimeko.
Ukucacisa itheyibhile yokuCoca uMshini G9
Umzekelo Umshini wam wokucoca i-G9
Potencia I-120 AW
Amandla 0.6 litros
Ukuzimela ukuya kuthi ga kwimizuzu engama-60
Ibhetri esusekayo SI
Ubunzima bebonke 5.45 kg
Ubukhulu X x 75.2 32.9 13.2 cm
Ixabiso 179.00 €
Ikhonkco lokuthenga Umshini wam wokucoca i-G9
Ngokugqibeleleyo ukusebenza ngesandla esinye.
Akhawunti iindlela ezintathu zamandla okutsala kwiimfuno ezahlukeneyo.
Ukuzimela ukuya kuthi ga kwiyure enye yokusetyenziswa.
Ukusetyenziswa kwesandla esinye
El Umbala omhlophe ivela ngokulula emdaka.
Iziphumo Inzima kancinci kudala siyisebenzisa.
Ayinaso isikrini ngolwazi.
Umshini wam wokucoca i-G9
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Umshini wam wokucoca i-G9, uhlalutyo, ukusebenza kunye nexabiso